Yechina RC yeWifislax64 1.1 yakaburitswa | Linux Vakapindwa muropa
Mamwe mazuva apfuura kuwanikwa kwechina RC vhezheni yeWifislax64 1.1 kwaziviswa. Iyi vhezheni ine yakakosha maficha maficha, ayo anoenderera mberi nekuvandudza mashandiro eichi chinoshamisira kugovera
Wifislax iko kugovera kuri kwakatsaurwa chete kune kuongorora kweNetwork network, zvakare kusanganisira mamwe maturusi ekuongorora kuchengetedzeka kuMan in The Middle kurwisa kana kunyangwe kuchengetedzeka kwenharembozha. Kugoverwa uku chiSpanish uye kunovandudzwa netambo isina waya yekuchengetedza.
Kana iri nhau, Mazhinji emapakeji ekuparadzira akagadziridzwa kune yazvino vhezheni, muzvirongwa senge filezilla, python, hydra, qbittorrent... Kernel yakagadziridzwa zvakare, iyo yabva pane vhezheni 4.9.38 kuenda kuiyo 4.9.39.
Uyewo mashandiro avandudzwa, chimwe chinhu chakavepo nekuda kwekukamurwa kwesystem kuita mabhuroko e64 kilobytes, zvichideredza kushandiswa kwezviwanikwa. Iyo menyu yakagadzirwazve, iyo yakagadzirwa ne .menu yekuwedzera, nekudaro kugadzirisa dambudziko raivepo neSlackware menyu yekuvandudza.
Uyewo iyo fstab yakagadziridzwa, chimwe chinhu chinoita kuti iyo sisitimu yekushandisa iende nekukurumidza uye hapana kumbobvira kwadzikira sepakutanga. Chekupedzisira, zvigamba zvekuchengetedza zvaiswa uye Wireshark mapakeji akagadziridzwa.
Pasina kupokana, Wifislax64 1.1 iri munzira yakanaka uye iyo yakamirirwa kwenguva refu vhezheni inotarisirwa kuti pakupedzisira ibude munguva pfupi. Wifislax ndeimwe yeanonyanya kushandiswa masisitimu anoshanda munyika yeWireless chengetedzo, nekuti inotibvumidza kutarisa kuchengetedzeka kwenetwork yedu yeWi-Fi tisina ruzivo rwekuraira. Iyo inoshanda sisitimu ine akawanda graphical maficha kune zvirongwa zvakaita seReaver, zvichiita kuti zvive nyore kwazvo kutarisa kuchengetedzeka kwenzvimbo yedu yeWi-Fi.
Kana iwe uchida dhawunorodha vhezheni yazvino, zvibudirire pano, nekuti kunyangwe iri RC vhezheni, iko kushandiswa kwakawanda kweWifislax kuri muRarama CD fomati. Ehezve, isu hatina mhaka yekushandisa iwe kwaunopa kuchirongwa, nekuti mashandisiro ayo ekutanga kuongorora kuchengetedzwa kwenetwork yako, kwete kuzviita neyevavakidzani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Yechina RC yeWifislax64 1.1 yakabuda